Iindlela ezi-5 zokwenza abaThengi bakho bazive bethandwa | Martech Zone
Ezona nkonzo zibalaseleyo zabathengi zifuna okungaphezulu kunoncumo, nangona ngokuqinisekileyo sisiqalo esihle eso. Abathengi abonwabileyo bakhokelela ekuphindaphindeni kweshishini, ukonyusa uphononongo oluqinisekileyo (olonyusa i-SEO yengingqi), kunye nokunyusa imiqondiso yentlalontle enoluvo oluqinisekileyo (oluthi lubonakale ukubonwa kokukhangelwa kwezinto eziphilayo), kwaye akukho nkampani inokubakho ngaphandle kwabaxumi bayo. Nazi iindlela ezintlanu ezilula zokuqinisekisa ukuba abathengi bakho baziva bethandwa.
1. Buza imibuzo efanelekileyo
Yonke inkampani kufuneka ibuze lo mbuzo yonke imihla: Yintoni enokwenziwa ukwenza izinto zibe lula kumthengi? Isenokuba kukuxhaswa kwengxoxo ebukhoma kwi-Intanethi, uhlala uqinisekisa ukuba abathengi banokufikelela ngokukhawuleza kumntu ophilayo, okanye bachithe ixesha elincinci ngakumbi kuyilo oluphendulayo. Xa izinto zilula, abathengi bayavuya kwaye oko kufanele kube yeyona njongo iphambili kuyo yonke ishishini.
2. Ulawulo loBuntu
Indlela abaphathwa ngayo abathengi iqala ngobuntu obufudumeleyo, obamkelekileyo kunye noncumo. Ukumomotheka xa uthetha nomthengi kwifowuni yenye yeendlela zokwenza ukuba ilizwi lakho livakale ngakumbi, lifudumele kwaye linobuhlobo. Kuyamangalisa ukuba kuyasebenza, kodwa kuyasebenza (zama!). Kwiphepha le-flip, abathengi banokuxela kwangoko ukuba umqeshwa akafuni ukuba lapho okanye usuku olubi. Oku kuseta ithoni kuyo yonke intengiselwano kwaye kunokugxotha ngokulula abathengi. Ukujonga ukusebenzisana, babe neeseshoni zoqeqesho rhoqo kwaye ubeke abantu abafanelekileyo kwizikhundla zonxibelelwano zabathengi.
3. Landela Up
Kuya kubakho iingxaki nokuba inkampani izibophelele kangakanani kwinkonzo. Ukuyiphatha ngokukhawuleza nangobuchwephesha linyathelo lokuqala, kodwa ukulandelela kubalulekile. Abathengi kufuneka bazi ukuba inkampani yakho iyakhathala kwaye ayizukutyhala izinto phantsi kombhoxo nje ukuba isisombululo sifunyenwe.
4. Zama ukuGxila kumaQela okuGxila kwiiNkonzo
Amaqela ekugxilwe kuwo avumela abanini bamashishini ukuba baphonononge iqela labathengi abanokubakho kwaye bafumane into abayifunayo, inkonzo abayilindeleyo, kwaye inokwenza isikhunta sokwenza ngcono iinkonzo. Zilungiselele kwaye ugcine ingqondo evulekileyo; Kungamangalisa okanye kuphazamise ukuva ingxelo ngqo kwiqela labathengi okanye kubathengi abanokubakho. Kuya kuthatha isikhumba esityebileyo ngamanye amaxesha ukuya kule nkqubo.
5. Rhwebesha Abasebenzi
Kwilizwe elifanelekileyo, bonke abasebenzi baya kubonelela ngenkonzo ephezulu ngenxa yokuba bakhathalele ngokwenene ishishini kunye nabathengi. Ngelishwa, akusoloko kunjalo. Yongeza inkuthazo, efana nebhaso lomqeshwa ngezona zithuba zibalaseleyo zeenkonzo zabathengi, kwaye wenze ibhaso elifanelekileyo lokulwela – njengesiqingatha seentsuku ngolwesiHlanu kangangenyanga kungekho ntlawulo. A iyasebenza inkqubo yokufumana umvuzo.
Kuyo yonke le nkqubo, qiniseka ukuba abasebenzi bajongiwe ngendlela efanelekileyo. Kuya kufuneka ukuba babe nolwazi lokubekwa esweni, kwaye kufanele ukuba kubeyinxalenye yovavanyo lonyaka. Iiphakheji zenkxaso ziyafumaneka, kwaye kuhlala kunokwenzeka ukuba ujonge lonke unxibelelwano lwe-elektroniki ukuba ufuna ukubeka iliso kwimithombo yonxibelelwano phakathi kwabasebenzi bakho kunye nabaxumi; ihlala yindawo elungileyo ukuqala ukubona iingxaki ezinokubakho nokuzisombulula.
tags: CRMInkonzo eyenzelwe
Sep 4, 2013 kwi-12: 18 AM
Ndiyavuma, abasebenzi bethu okanye abasebenzi kufuneka babe yinxalenye ebalulekileyo yephulo lethu lokuthengisa. Kungenxa yoko le nto kufuneka sibaxhobise ngoqeqesho olufanelekileyo lwenkonzo yabathengi kunye nokuqaqambisa izakhono zabo zokuthengisa. Abathengi bethu baya kuziva bethandwa ngakumbi ukuba bonke abantu kwishishini lethu bayakubonisa oko kubo.